Inrico T298s 3G / Wifi UHF Radio 400-470 MHz (Android yakavhurwa) EU / UK / Australia - Network maRadio
musha / Radios / Network maRadio / Inrico T298s 3G / Wifi UHF Radio 400-470 MHz (Android yakavhurwa) EU / UK / Australia
Rated 5.00 Kunze kwe5 yakavakirwa 2 kasitoma ratings
Iyi vhezheni ine yakachena Android. Chenjera kukwikwidza uyo anotengesa firmware vhezheni izvo zvisingatenderi kuisa mapurogiramu kubva ku PlayStore. Kana iwe watotenga kubva kune mumwe mutengesi, unofanirwa gadza iyo T298s Yakavhurwa firmware kurodha iyo inozivikanwa ham radio maapp.
Iyo Inrico T298s ndeye network redhiyo ine yakadzamidzirwa UHF FM transceiver iyo inobvumidza 100% kufukidzwa. Pamwe nesero kana redhiyo, iwe unogara uchibatanidzwa.
Iwe unogona kumisikidza yakaparadzaniswa TX uye RX mafambiro, pamwe nehurongwa CTCSS matoni ekushandisa neakajairika anodzokorora.
Tarisa zvimwe Rarama chiteshi. Iyi redhiyo inotakura neZello pre-yakaiswa.
Kana iwe uchida redhiyo iyi yebhizinesi, saka unofanirwa kufunga nezvekushandisa Zello Basa (kubva ku $ 61.20 / yr) kana PTT4U (kubva $ 59.00 / yr)
Category: Network maRadio
Iyi nhepfenyuro redhiyo inoenderana zvizere ne International Radio Network (IRN) uye neiyo nyowani Echolink yeApple.
Iyi ichiri hamradio here? Verenga izvi chinyorwa.
Uri kutsvaga nzira mbiri here? Iwe uchangobva kuwana rakanakisa redhiyo shopu!
Ko kana iwe uchigona kuve ne walkie talkie app pafoni yako? Ngatizvitaurirei iwe yakanakisa walkie talkie app yakamboitwa: Zello ndeye walkie talkie app yeApple, iphone, IOS uye kune zvakare zello yePC.
Iyi redhiyo-senge smartphone ine PTT inozoisa kumusoro iyo inotumira. Kusvika iwe uine dataplan kana kubatana kweWiFi, saka unenge uine a nzira mbiri walkie talkie app ine huwandu hwepasirese.
Chekutanga, dhawunirodha iyo Zello app. Wobva wadzvanya yako zello PTT bhatani uye muchanzwikwa!
Iwe unogona kuva ne1-to-1 kutaurirana kwakazvimirira, kana 1-kune-mazhinji kutaurirana pane yakavanzika zello chiteshi. Kune zvakare akawanda veruzhinji zello chiteshi, aine akasiyana zvinangwa, kutenderera pasirese.
Dzimwe hamradio RF network dzakabatana neZello zvakavanzika chiteshi. Nezvakadai, kana iwe uine rezinesi ham, saka unogona kugara online ne zello uye uine maQSO neshamwari dzako ham. Kune akawanda zellos pasi rese. Ungada kuva mumwe? 🙂
Kugamuchirwa kuZello PTT walkie talkie world!
Tsigiro Yenethiwekhi: GSM900 / 1800 MHz, WCDMA2100
Yakakurumbira Frequency: 1.0 Ghz
Chikuva: MTK 6572A
Kushandisa System: Android 4.4.2
Ndangariro: 32Gb + 4Gb
Yakawedzerwa Ndangariro: kusvika ku32Gb
Bhatiri Kugona: 3500mAh
Screen TP Ratidza: 2.4QVGA 240 * 32 yakawanda-poindi yekubata skrini
Intercom Pasi Pose
Makamera kumberi uye kumashure, tarisa otomatiki
Super-yakasimba yakamira kupfuura maawa mazana masere
32-dhayamita mutauri ane mbiri makamuri
Positioning system inotsigira GPS + BeiDou
Tsigira WIFI / BT / MP3 / MP4
MICRO 5PIN data mutsara
IP54 dhizaini yekudzivirira, mhando yeuto
VHF Shanduro (137-174 MHz)
UHF Shanduro (400-470 MHz)
Simba: 5 W
Chitupa: CE FCC Rohs Chitupa
Battery chinzvimbo: 3500mAh
Mazhinji evatakuri venyika yose vanotsigira iyi modhi. Zvisinei, muU.S., chete AT & T inotsigira chigadzirwa ichi.
Dhawunirodha Inrico T298s Mirayiridzo Yekutungamira
2 anodzokorora nokuti Inrico T298s 3G / Wifi UHF Radio 400-470 MHz (Android yakavhurwa) EU / UK / Australia
CT1EIZ - December 5, 2017
Tarisa uone kuti maredhiyo aya akasimba sei: https://www.youtube.com/watch?v=WyPIDvEmXJk
Ian - February 2, 2018
Iwo maT298s akasimba akasimba eredhiyo, yakasimba uye mhando kuvaka ndeyechipiri kune hapana.
Kunzwa kwaro kwakaita senge chikuru mutambi redhiyo, uye nyore kushandisa kunoita kuti ive huru kutenga,
mutauri wemhando yepamusoro uye kurira kwakajeka ndizvo zvinofanirwa nechidimbu chekit. mufaro wakadai kushandisa uye haumbodi kuzviisa pasi!
mabhatani anoorora uye emhando yepamusoro.
Unogona zvakare kuda…
Radio Tone RT4 4G / LTE WiFi (Android yakavhurwa)
Rated 4.83 kubva 5
355€ Wedzera ngoro
Inrico TM-7 Plus 4G / WiFi Mobile Network Radio (Android yakavhurwa)
Sale! 355€ 305€ Wedzera ngoro
Talkpod N50 3G / WiFi (Android vhezheni)
284€ Select mikana
406€ Select mikana